Bill Duke kwuru na a chụrụ Jean Claude Van Damme 'Onye na -eri anụ' maka ịbụ onye mmiri na -adịghị mmiri - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Bill Duke kwuru na a chụrụ Jean Claude Van Damme 'Onye na -eri anụ' maka ịbụ onye mmiri na -adịghị
Bill Duke kwuru na a chụrụ Jean Claude Van Damme 'Onye na -eri anụ' maka ịbụ onye mmiri na -adịghị
Ọ bụrụ na ọ kpọnwụọ, anyị nwere ike gbaa ya ọkụ
by Trey Hilburn III September 12, 2021 3,893 echiche
N'oge na -adịbeghị anya ịntanetị na -ewe oke iwe ịnụ ka onye na -eme ihe nkiri na -arụ ọrụ site na ụlọ ihe nkiri. Otu ụbọchị awa iri na abụọ juputara n'ịkwa mkpu dị mma maka anyị ụlọ oriri na ọ outụ workingụ na -arụ ọrụ na -abụghị ihe nkiri, mana ndị na -eme ihe nkiri a na -amanye ịrụ ọtụtụ awa ma onye isi ha na -akparị ha bụ nọmba onye iro ọha. Ọ dị mma, ịntanetị na-achọ oke iwe na n'ụzọ ziri ezi na a ga-achụ Jean-Claude Van Damme maka… nweta nke a…
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime anyị maara na Jean-Claude Van Damme ga-egwu egwu mbụ eri ibe. Ụdị nke nnukwu dinta nwere anya dị iche. Anya ahụ na -adịbu ụmụ ahụhụ na -emegide ihe ọ ghọrọ. Kevin Walker Hall mechara were ọrụ nke eri ibe ma mee ka ọrụ ahụ bụrụ akara ngosi.
Van Damme na -ekwu mgbe niile na itinye aka na fim ahụ bụ nke abalị. Ọ na -akpọnwụ mgbe niile na -arịa ọrịa na setịpụrụ n'ihi uwe na oke okpomọkụ n'oké ọhịa.
eri ibe Onye na-eme ihe nkiri Bill Duke gwara Murder Master Music wee kwuo na onye ya na ya na-emekọ ihe nọ na nnukwu nsogbu na akpịrị ịkpọ nkụ.
Anyị nọrọ n'oké ọhịa Puerto Vallarta na Palenque ruo ogologo oge. Amaghị m ma ị maara akụkọ a ma ọ bụ na ị maghị, mana Predator nke ị hụrụ abụghị onye mbụ na -eri anụ. Onye na-eri anụ mbụ bụ ihe okike dị obere ma ha ga-etinye mmetụta pụrụ iche n'ahụ ya na mmepụta ihe. Ya mere, ọ nwere uwe mwụda wee tinye ya na wires wee fego na osisi na eriri ya n'azụ dịka ọ na -efe efe. Ọ nwụọla ugboro abụọ site na akpịrị ịkpọ nkụ, onye na -emepụta ihe bịakwutere ya wee sị, 'Ọ bụrụ na ị gafee ọzọ, aga m achụ gị ọkụ.' Nwoke ahụ wee sị, 'Anaghị m agabiga n'ebube! Mmiri na -agwụ m! ' Onye na -emepụta ihe kwuru sị, 'Agafela ọzọ.' Izu abụọ agaa, nwoke ahụ anwụọ. Onye na -emepụta ihe na -aga ọkụ wee chụọ ya. Onye ahụ bụ Jean-Claude Van Damme. ” Duke gwara Murder Master Music.
Ị nwere ike iche n'echiche na a ga -achụ gị ọkụ n'ihi na mmiri na -agwụ ya? Ịrịọ
N'ikpeazụ ọ rụpụtara Van Damme nke ọma. Nwoke ahụ wee bụrụ nnukwu kpakpando ime ihe egwu. Yabụ, ejiri m n'aka na ọ banyela nke ọma na mpaghara oge gara aga. Ọzọkwa, ị nwere ike were ya ma ọ bụrụ na eri ibe suit bụ nke e ji mee ihe? Eleghị anya ọ gaghị abụ ihe kụrụ akụ ka ọ ghọrọ.
Kedu ihe ị chere gbasara ụdị uwe ahụ Van Damme mbụ pụtara? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa.